टेकुबाट भागेर धरान आएका युवा वीपी अस्पतालबाट पनि भागेपछि यस्तो हलचल! – PathivaraOnline
Home > समाचार > टेकुबाट भागेर धरान आएका युवा वीपी अस्पतालबाट पनि भागेपछि यस्तो हलचल!
admin March 6, 2020 समाचार	0
धरान। कोरोनाको आशंकामा टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहदा भागेर धरान घर आएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका विरामी यहाँबाट पनि भागेका छन् । प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा उपचार भइरहेको अवस्थामा उनी बिहिबार राती भागेका थिए । वीपीबाट भागेपछि अस्पतालमा फेरि पनि हलचल मच्चियो । उनी भागेको करिब एक घण्टा पछि प्रहरीले फेला पारेर पुनः प्रतिष्ठानमा नै उपचारको लागि ल्याएको डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले जानकारी दिए।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार कोरोनाका शंकास्पद विरामीको लागि व्यवस्था गरिएको पेइङ वार्डमा राखेर उनलाई उपचार भइरहेको थियो । टेकुबाट भागेर आएपनि यहाँ उनी आफै उपचार गर्न आएकोले भाग्ने अनुमान थिएन । पेइङ वार्डलाई आइसोलेसन गरेर एउटा मात्र ढोका आउजाउ गर्न खुला गरिएको थियो भने बाहिर सेक्युटिरी गार्ड पनि थिए।
‘गार्ड पनि बाहिरै थिए, तर पनि छलेर भागेछन्,’स्रोतले भन्यो,‘एक घण्टा पछि प्रहरीले खोजेर ल्यायो ।’उनी मंगलबार मात्र दक्षिण कोरियाबाट नेपाल आएका थिए । बुधबार आफै टेकु अस्पताल उचपारको लागि पुगेका उनी त्यहाँबाट भागेर घर धरान आएका थिए । उनलाई कोरोनाको लक्षण वा पुष्टि भएको छैन । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले ती विरामीलाई कोरोना भन्दा पनि मानसिक समस्या भएको हुनसक्ने बताए।
रवि लामिछाने पुजा-आजामा व्यस्त, यस्तो छ नयाँ टिभीकाे तयारी (भिडियो सहित)